Ukubala umahluko wepesenti kwi-Excel
Umahluko sisalathiso somahluko phakathi kwenani elinye nelinye. Ukukuqonda oku, cinga ukuba uthengise iiwijethi ezili-120 ngosuku olunye, kwaye ngosuku olulandelayo, uthengise ezili-150. Umahluko kwintengiso ngokweyona migaqo kulula ukuyibona; uthengise ezinye iiwijethi ezingama-30. Ukukhupha iiwijethi ezili-120 kwiiwijethi ezili-150 kukunika iyantlukwano yeeyunithi ezingama-30.
Ke yintoni umahluko okhoyo ngepesenti? Oku kubaluleke kakhulu ipesenti Umahluko phakathi kwenani lokulinganisa (120) kunye nenombolo entsha (150). Ubala umahluko wepesenti ngokuthabatha inani lebenchmark kwinani elitsha emva koko wahlule isiphumo ngenani lokuma. Kulo mzekelo, ukubala kujongeka ngoluhlobo: (150-120) / 120 = 25%. Umahluko ngepesenti ukuxelela ukuba uthengise ii-widgets ezingaphezulu kwama-25 epesenti kunayizolo.
Inani libonisa indlela yokuguqula le fomyula. Ifomula kwi-E4 ibala ukungafani kwepesenti phakathi kwentengiso yonyaka kunye nentengiso yonyaka ophelileyo.
Inye kuphela into ekufuneka uyiqaphele ngale fomyula kukusetyenziswa kwabazali. Ngokuzenzekelayo, i-odolo ye-Excel yokusebenza ithi ulwahlulo kufuneka lwenziwe ngaphambi kokuthabatha. Kodwa ukuba uyayivumela loo nto yenzeke, uza kufumana iziphumo ezingalunganga. Ukusonga icandelo lokuqala lefomula kubazali kuqinisekisa ukuba i-Excel yenza ukuthabatha ngaphambi kwesahlulo.
Ungangena ngokulula kwifomula enye kumqolo wokuqala (iseli E4 kule meko) uze ukope loo fomyula phantsi kwawo wonke omnye umqolo kwitafile yakho.
Enye indlela: Ukubalwa kwepesenti eyenziwe lula
Enye indlela yokubala umahluko wepesenti kukwahlula intengiso yonyaka wangoku ngentengiso yonyaka ophelileyo emva koko uthabathe 1. Ngenxa yokuba i-Excel isenza imisebenzi yokwahlulahlula ngaphambi kokuthabatha, awunyanzelekanga ukuba usebenzise izixokelelwano zabazali ngale ndlela ifomula.
thenga amarhe uthengise iindaba
iimpawu zokungabikho komzimba kumayeza okubulala iintsholongwane
iziphumo ebezingalindelekanga ezivela kwi-lisinopril
ungayithatha i-zyrtec kunye ne-claritin kunye
Umthamo we-diltiazem we-fibrillation ye-atrial